Igcine ukubuyekezwa: May. 25 2019 | 1
Uma Notre Dame sika football star Manti Te'o wahlangana nentombi yakhe Twitter akazange ngisho okusolwa okwakuzokwenzeka olandelayo. Intombi yakhe yafa ngesikhathi phakathi football yakhe isizini, noma okungenani watshelwa lokhu. In ngokoqobo, wayezwe catfished by omjwayele, kokusuka Te'o lusizi futhi ngihlazekile. Kulabo unaware of lokho "catfishing" kuba, lapho umuntu online uzenza ukuthi kukhona umuntu akuzona noma ngokufuna imali noma ezinye izinto out of izisulu abangaqaphile. In 2011, FBI kulinganiselwa ukuthi azungeze $50.4 million ilahleke catfishing imikhonyovu siphakamise nokugasela ngamandla kwalesi scheme.
Indlela uzivikele catfishing imikhonyovu
Catfishing kulula ukubona ngokumane ufuna izinto ezibonakala ukufanisa up. Izikhathi, a cat fisher uzokutshela izindaba umane awahambelani. Enye indlela enkulu ukuzibona iphrofayli fake ukucela abangane uma ngempela umuntu (lapho cat okusolwa fisher ubuye abangane nabangani bakho online). Uma kungekho omunye omaziyo owake wahlangana umuntu kungenzeka bengekho ngubani bathi. It njalo kungumbono omuhle uma uzizwa cat like ubhekene nokuba badoba kuya emuva uhlole umlando womuntu futhi nje ubone uma ungathola ulwazi kubo.
Funda kabanzi mayelana catfishing kanye nomonakalo kungabangela kule graphic ezifundisayo instantcheckmate.com.
Ukugwema Being Catfished Infographic